Fitrandrahana Sandelam-bary manonta - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>fampiharana>> Fitrandrahana Sandelam-bary
Sandam-panodinana fasika angovo, Shanghai XSM dia fitaovam-pambolena matihanina manerantany, Aggregate Sand Washing Machine, fitaovana fiarovana ara-tsakafo, orinasa mpanodina famokarana varotra. Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny voalohany bande conveyor, vibrating feeder, fitaovana fandefasana entona handefa ny jaw crusher, impact crusher, hydraulic crusher dia harona matevina matevina, ary faharoa amin'ny a jawcrusher kely, hammer crusher Fitrandrahana harena ankibon'ny tany faharoa tadin efijery Ny fihaonana amin'ny mari-pamantarana maromaro amin'ny ore dia entina mankany amin'ny baolina baolina, ultrafine mill ert magnetic separators, flotationmineral machine dia mifidy karazam-pahalalana maro samihafa. Mazava ho azy, fa fanodinana fitrandrahana harena ankibon'ny tany fotsiny ity, Shanghai XSM mifototra amin'ny karazan-kira misy anao fitaovam-pako izay mifanandrify tsara anao, raha manana fanontaniana ianao, dia miangavy anay hifandray aminay na tsindrio ny tsara eo amin'ny sehatry ny famolavolana, ny mpiasa ara-teknika dia manome anao valiny amin'ny antsipiriany.
Ny Sand Washing Machine dia manome vahaolana tsotra sy mahomby ary manam-bola mba hanatsarana ny laharam-pahamehana sy hanatsarana ny dingana manaraka eo amin'ny famerenana. Ity fomba fitsaboana ity dia manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana sy ny fampiasam-bola ary ny fampitomboana ny vokatra vokatra, raha toa ka mamela haingana sy haingana ny fanodinana volombolo.
Ny Kitapo fandanjana sandanay dia natsangana tamin'ny fitaovana avo lenta, natokana ho an'ny fampivoarana avo lenta, ny taham-pamokarana avo lenta, ny fandaniana ambany kokoa ary ny fikojakojana kely kokoa.
Ity fitaovana nivoaka avy amin'ny Trommel Apparatus ity dia avy eo mankany amin'ny fitaovana fitiliana any ivelany izay mety amin'ny endrika isan-karazany toy ny kôpinetra, rivotra, sns.
Natao ho an'ny fananganana ara-toekarena & mahomby, Famerenana sy famaritana
Fitaovam-piadiana mahery fihazakazaka miaraka amin'ny mpamonjy eo anoloana mba hanamora ny fanimbana ara-materialy
Ny efijerina azo ovaina ho an'ny haben'ny maotina samihafa
Habe ny habeny
Novana mora ny takelaka fisie
Ny harena lehibe indrindra amin'ny indostria
Ny fanehoana an-tsehatra tokana, dia miteraka fahaiza-manao ambony kokoa, fiainana lava kokoa ary tsy misy fikolokoloana
Toerana fanatobiana entana sy fanitarana
Jinshibao Sand Washing Machine dia ahitana trom-boromailala, fikolokoloana, fitsinjarana, famerenana haingana, motor, rano flusher etc 6 ampahany. Fitrandrahana harena an-kibon-trondro, miaraka amin'ny fanampian'ny hery mivezivezy amin'ny rivotra ary miparitaka amin'ny fanivanana fitaovana. Ary sokajy avy amin'ny mason-tsivana samihafa. Ny fitaovana samihafa dia hampita amin'ny fitaovana vita aorian'ny fantsona. Amin'ny lafiny iray, ireo fitaovana lehibe dia hikorontana eo amin'ny fihodinan'ny trommel, ary ny mason-tsivana amin'ny mason'olona samihafa. Ny halavany kely dia hamoaka ny fanontam-pirintany manokana ary hikarakara azy amin'ny tanana.
GT Series Sand Washing Machine dia mampiasa fomba fiasa mahazatra, manangona sehatra misoritsoritra amin'ny endrika baoron'ny rivotra amin'ny pore. Asehoy amin'ny alalan'ny lanjany 3 ny vata-tsoroka ao anaty trommel avo kokoa noho ny tavy, mba hanosehana fitaovana lehibe mba hampitombo ny tahan'ny sokajy. Ary ny fandresen-dahatra dia hanampy azy handroso, miditra ny entana farany. Ny poaram-bidy kely kokoa dia hameno ny porofo ary hahazo ny vokatra farany.
← Fitrandrahana akanjo fitrandrahana harena an-kibon'ny tany
SAND AGGREGATE FANAZAVANA ANJARA →